पाँच वर्षमाथिका बालबालिकालाई दिन मिल्ने काे-राेना विरुद्धको खोप बजारमा आयो ! - Info Nepal
INFONPLअन्तराष्ट्रियपाँच वर्षमाथिका बालबालिकालाई दिन मिल्ने काे-राेना विरुद्धको खोप बजारमा आयो !
पाँच वर्षमाथिका बालबालिकालाई दिन मिल्ने काे-राेना विरुद्धको खोप बजारमा आयो !
पाँच वर्षमाथिका बालबालिकालाई दिन मिल्ने काे-राेना विरुद्धको खोप बजारमा आयो ! अमे-रिकी विज्ञहरुले को- भिड विरुद्धको फाइजर खोप पाँचदेखि ११ वर्षका बालबालिकालाई दिन मिल्ने बताएका छन् ।
अमे-रिकाको खाद्य तथा औषधिसम्बन्धी प्रशासन (एफडीए) का विज्ञहरूको एउटा समूहले पाँच वर्षदेखि माथिका बालबालिकालाई फाईजर खोप दिन मिल्ने बताएको हो । विज्ञहरुका अनुसार सो उमेर समूहका बालबालिकालाई वयस्कलाई दिइएको खोपको एक तिहाइ मात्रा दिइनुपर्छ ।
विज्ञहरुले खोपलाई स्वीकृत गरेसँगै २ करोड अमे-रिकी बालबालिका यसबाट लाभान्वित हुनेछन् तर, एफडीए र अमेरिकाको रोग नियन्त्रण तथा उन्मूलन केन्द्रबाट खोप अनुमोदन हुन भने बाँकी छ । यसअघि सेप्टेम्बरमा खोप निर्माता कम्पनीले परीक्षणपछि सानो उमेर समूहका बालबालिकालाई पनि खोप दिन सकिने जनाएको थियो ।
अमे-रिकामा सो खोप १२ वर्षमाथिकालाई केही महिनाअगाडिदेखि दिन थालिएको छ । अमे-रिकाले १ लाख भन्दा बढी फाइजर खोप नेपाललाई अनुदानमा दिएको छ । पहिलो चरणमा १२ वर्षमाथिका दी-’र्धरो-गीलाई सो खोप दिइने छ ।